Soomaalaay Maxaa Inaga Si Ah? | WWW.SOMALILAND.NO
Posted on Janaayo 19, 2009 by Weriye2
Xamse Maxamed Xubin Ka Tirsan Golaha Deegaanka Ee Oslo Xisbiga (SV).
Waxaa naxdin igu noqotay in aan arko bogga hore ee jaraa’idka gelinka danbe magaaladda Oslo ka soo baxa ee la yidhaa Aftenposten Aften. Halkaas oo frontpage-ka ay ku qornayd ”Butikkene plages av khat-brukere” taas oo macnaheedu tahay meheradaha waxaa dhibaato ku haya dadka qaadka cuna.
Maqaalkaas ayaan ahayn kii ugu horeeyey ee qaad lagaga sheekeynayo ee ku soo baxa jaraa’idadda waaweyn ee ka soo baxa dalkan Norway. Waxaa meeshaa waraysi ku bixiyey dad ka mid ah kuwa dukaamadda ku haysta goobta Grønland la yidhaa. Waxaa ay dadka halkaa lagu waraystay sheegayaan dhibaatadda iyo dhaawaca dadka qaadka cuna ee dukaankooda hor istaagaa ku hayo. Waxay sheegeen in dadka soomaalida ahi inta ay qaad soo qaataan is hor istaagaan dukaanka iyagga oo raxan-raxan u socda. Taasu waxay keentaa in dukaankii dadkii wax ka iibsan lahaa ay ka leexdaan oo macaamiilba u soo geli waydo.
Qof dumar ah oo meeshaa lagu waraystay waxay sheegtay in ay si deg-deg ah meheradeeda albaabada ugu laabi doonto. Waxay sabab uga dhigtay in aanay cidi u soo gelin oo khasaare dhaqaale oo uu dukaankii isbixin waayay ku keentay. Waxay kale oo intaa ku dartay in maadaama oo ay ruux dumar ah tahay ka cabsato nimanka soomaalida ah ee dukaankeeda markasta hor tuman. Sida ay sheegtay imika mar kasta u yeedhataa ninkeeda oo meheradda la xidha.
Mid kale oo halkaa lagu waraystay wuxuu sheegay in uu lacag ka bixiyo ilaaladda kormeerka samaysa oo maalintii dhowr jeer soo booqata.
Ninkii suxufiga ahaa intaa kumuu eekaan ee wuxuu soo waraystay dadkii jaarka meheradahaa la ahaa si uu u soo xaqiijiyo warka ay dadka dukaamadda lihi sheegayaan. Inyar mooyaane waxay xaqiijiyeen arintaa oo ay weliba ku sii dareen in dhibaato ka haysato nadaafad darro meeshaa ka jirta. Nadaafad daradaa ayay sheegeen in ay ugu wacan tahay nimanka soomaalida ah ee meeshaa hor istaaga oo sigaar iyo candhuuf iyo garaabo ka buuxiya wadadda.
Hadaba, ta is weydiinta lihi waxa weeye miyey tahay in la is weydiiyo waxa inaga si ah? Miyeynu khaldanahay mise waynu saxsanahay? Hadii aynu khaldanahay maxaynu samaynaa oo aynu khaladkeena ku saxnaa?
Su’aalahaas oo dhan jawaabtoodu waxay muhiim u yihiin in aynu doonayno ka qayb noqosho aynu ka qayb noqono mushtamacyadda cusub ee aynu u soo guurnay. Waxa kale oo arintaa xalka aynu u halnaa saameyn weyn ku yeelan doonaa mustaqbalkeena wadamaddan aynu nimid sida uu noqon doono. Waxaa kale oo arintan wax ka qabashadeedu muhiim u tahay sawirka dadka soomaalida laga haysto oo aan wanaagsanahayn sidii sharaftiisii iyo ixtiraamkii uu mudnaa sidii loogu soo celin lahaa.
Dadka soomaalida ah ee Norway deggan ayaa badankoodu ah dhalinyaro iyo caruuur soo koraysa. Magac xumudda dadka imika waaweyni ay soomaalida u sameeyaana waa weligood mid daba socon doonta hadii aan imika la is daba-qaban oo aan wax lala kala hadhin. Markaa walaalayaal hala tashado. Qof weliba isaga iyo inta ugu dhow haka bilaabo, hawl weyna halaga qabto foolxumaddan ina dulhuwan. Taasi waxay inoo keeni doontaa in aynu inakuna wax isku tarno, mushtamacan aynu la joogno ee aynu imika ka qaybta nahayna aynu wixii xaq aynu ugu leenahayna ka helo waajibkeenana gudano.
Ugu danbayntii waxaan doonayaa in aan sheego sababta qoraalkan keentay in aan qoro. Qoraalkan ayaan ahayn mid canaan ah ee ujeedadiisu tahay wax isu sheeg iyo talo. Marar badan oo dadka soomaalida ah xumaan laga qoray ayaa waxaa dhacday in dadka soomaalida ah lagu canaanto af kale oo aan kooda hooyo ahayn. Taasina keento ceebtooda dad aan danaynahayn in lagu wareeriyo. Taas ayaa ugu wacan in aan doorto habkan cusub ee cidii ay khusaysay toos ula hadlayo, aniga oo aan ka dhex dayahayn isu soo bandhigid aan doonayo in aan dadka soomaalida ah aniga oo dhibaatadooda adeegsanaya in aan jaran-jaro ka dhigto oo aan isku dayo in aan boosas iyo magac ku doonto in aan afaf kale wax ku qoro.
Xamse Maxamed Xubin Golaha deegaanka ee Oslo Xisbiga (SV)
Musharax barlamaanka Norway
Wixii jawaab/talo/canaan ah iigu soo dira
« War-Saxaafadeed Ka Soo Baxay Guddidii Dood-Cilmiyeedka Miisaanka Maansada Soomaalida Oslo Norway. Masuuliyiinta Sar-sare Ee Xisbiga UCID Iyo Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Oo Maalinta Khamiista Feb.12, 2009 Booqasho Ku Imanaya Oslo »